Ubumfihlo - Umculo wamahhala kunye nokulandwa kwemidiya yevidiyo zakho ze-YouTube okanye iiprojekthi ze-multimedia
Umncedisi PetrPikora.com i-projekthi ye-HSTS (i-HTTP yoKhuseleko oluPhezulu). HTTP ukhuseleko oluThutho lwezothutho (HSTS) I-informatice bezpečnostní mechanismus, který chrání síťovou komunikaci mezi webovým prohlížečem i-webovým serverem i-downgrade útoky i-zjednodušuje ochranu proti únosu spojení (tzv. ukucoba ikhukhi). Mechanismus umožňuje, aby webový isebenzi vynutil v prohlížeči komunikaci poze pomocí šifrovaného i-HTTPS ibe yinkampani ye-intanethi ye-intanethi ye-HTTP protokolem. I-HSTS ichaza i-RFC 6797. Webový iseva ye-HSTS i-HTTP i-HTTP hlavičky Unqongqo-wezothutho-lezoKhuseleko, která svou hodnotou definuje časový úsek, i-ktrl-krás krás krás krás krás krás krás krás krás krás. I-HSTS i-pompohá chránit ibobo i-proti některým pasivním (odposlechy) i-aktivním síťovým útokům. Díky HSTS i-mechanismu má útočník, který využívá umntu-ngaphakathi-middle útok, velmi sníženou šanci, i-odvytí nějaké žádosti usebenzise i-odeslané mezi kwi-webovou aplikací. Staráme se ošiši bezpečnost!
website yethu ukuqokelela le ngcaciso ilandelayo malunga notyelelo lwakho:
Informace, i-které jsou nepovinné i-jenž uživatelé poskytují dobrovolně. Jedná se o jméno, případně přezdívku, e-melovou adresu, popřípadě adresu webové stránky. Toto jsou dobrovolně poskytnuté informace pro pro účast v komentářích ke článku, případě pro odběr odpovědí k těmto komentářům av návštěvní knize.
Bengenzi iqokelele iinkcukacha (oko kukuthi. Babelamkele ngaphandle uyayenza ngokunika ulwazi) kusetyenziswa ubuchwepheshe ezahlukeneyo iindlela, ezifana iidilesi Protocol Internet, cookies, Internet Tags abanye. Le ngcaciso iya kuvumela umxholo zazenzelwe ngcono kubasebenzisi zethu kwaye uyakusinceda umthengisi kunye nabaxhasi siqonde ngcono iindwendwe zethu .
Na těchto webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou požívat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu i-telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových káských káských káskák kárkák kárkák, které vás zajímají.
Google, njengomthengisi wesithathu, usebenzisa ukukhonza iintengiso kule sayithi cookies. DART cookie yenza Google kundikhonza iintengiso kubasebenzisi ngokusekelwe lotyelelo lwabo kule site kunye nezinye iindawo kwi-Internet.
Uživatelé se mohou po přečtení Nkqubo yabucala yentengiso kunye Network Content Google i-DART awunikeli.
Uninzi izihlolisi ngokuzenzekelayo ukwamkela iifayile cookie, kodwa browser yakho zingacwangciswa ukwala zonke ii cookies okanye ukubonisa ukuba cookie uthunyelwayo. Ezinye iimpawu kunye neenkonzo Google ukuze isebenze kakuhle xa cookies zakho abakhubazekileyo.
Ukuba ufuna, unako nanini na ukwala cookies ifayile ukusuka Google Inc Vsahové síti Google prostřednictvím Ukuphepha nqakraza cookies.
Ukukhangisa i Cookie Ukuphuma kwi-akhawunti ye-Firefox kwi-Internet Explorer záznam "I-cookie ye-DoubleClick", i-Googlem isebenzisa i-intanethi kunye ne-proxy ye-proxy.
Kule candelo, kufuneka ukhulume i-URL yesayithi yakho, kunye negama lenkampani, inhlangano okanye umntu osebenza kule ndawo kunye nolwazi oluchanekileyo loqhagamshelwano.
Isixa solwazi oluya kuyidinga ukwenza siya kuhluka ngokuya kwimimiselo nemimiselo yaseburhulumenteni. Umzekelo, kuya kufuneka unikezele idilesi yangokwenyama, inombolo yesazisi yenkampani.
Doporučený Umbhalo: Idilesi yethu yewebhu ngu: https://petrpikora.com.
Oko sikuqokelelayo nokuba kutheni siqokelele
Kule candelo, kufuneka ubonise ukuba uluphi ulwazi oluthile oluqokelela kubasebenzisi kunye neendwendwe kwiziko lakho. Ezi zinokuthi, umzekelo, idatha yokuthengiselana - ulwazi lokuthenga; idatha yobugcisa - ulwazi lwekhukhi; kunye nolwazi lomntu siqu - ulwazi lwe-akhawunti yomsebenzisi kunye ne-imeyile idilesi.
Kufuneka unikeze ngolwazi malunga nokuqokelela nokugcinwa kwedatha yomntu siqukileyo, njengengcaciso yezempilo.
Ukongezelela ekucaciseni ulwazi oluthile oluqokelelayo, kufuneka uchaze ukuba kutheni uqokelela. Ezi nkcazo kufuneka ziqwalasele isiseko somthetho sokuqokelela nokugcinwa kwedatha yomuntu siqu okanye imvume evumelekileyo yomsebenzisi.
Ulwazi lomntu siqu aludalwanga kuphela ngokusebenzisana nesayithi lakho. Idatha yomuntu siqu iveliswa yinkqubo yobugcisa ezifana nefom zoqhagamshelwano, izimvo, ii-cookies, i-analytics kunye nedatha efakwe kwiqela lesithathu.
Ngokungagqibekanga, i-WordPress ayiqokeleli nayiphi na inkcazelo engabonakaliyo malunga neendwendwe kwaye iqokelela idatha eboniswe kwiphepha lomlawuli "Iprofayile" kubasebenzisi ababhalisiweyo. Nangona kunjalo, ezinye zeeplagi-yakho ziyakwazi ukuqokelela ulwazi lomntu. Ngezantsi kufuneka udibanise ulwazi olulandelayo.
Kule candelwana, kufuneka ubonise ukuba uluphi ulwazi olurekhodwa ngamagqabaza. Ngezantsi sizinikezela ngolwazi malunga nolwazi oluphambili lwe-WordPress yedatha.
Doporučený Umbhalo: Xa iindwendwe amazwana kule website, data ziqokelelwa ngendlela eboniswe ukuba izimvo umkhangeli olunye undwendwe i-IP idilesi kunye nearhente yomsebenzisi umtya ukuchaza, enceda ukubona spam.
I-Gravatar inokubonelelwa ngentambo engaziwa yenziwe kwidilesi yakho ye-imeyile (eyaziwa nangokuthi i-hash) ukuqinisekisa ukuba usebenzisa le nkonzo. Inqubomgomo yobumfihlo yeGravatar iyatholakala apha: https://automattic.com/privacy/. Xa amazwana akho avunyelwe, umfanekiso wakho wembonakalo ubonakala kuluntu kumxholo weengxelo zakho.
Kule candelwana, kufuneka ucacise ukuba yeyiphi idatha engashicilelwa kubasebenzisi abangakwazi ukulayisha ifayile yeendaba. Zonke iifayile ezilayishiwe zivame ukufumaneka esidlangalaleni.
Doporučený Umbhalo: Ukuba ulayishe imifanekiso kule sayithi, kufuneka ugweme ukulayisha imifanekiso eneenkcukacha zendawo edibeneyo (i-EXIF GPS). Iindwendwe zeSayithi ziyakulanda kwaye zijonge nayiphi na idatha yendawo kwimifanekiso kwiwebhu.
I-WordPress ayifaki ifom yoqhagamshelwano ngokungagqibekanga. Ukuba usebenzisa i-plug-in yoqhagamshelwano, sebenzisa eli gatshana ukuba ubonise ukuba yeyiphi idatha ebhaliweyo ebhaliweyo xa umntu ethuma ifom yoqhagamshelwano kunye nokuba ugcina ixesha elingakanani le ngcaciso. Umzekelo, ungakhankanya ukuba uhlale iinkcukacha zoqhagamshelwano ifomu efunyenweyo ixesha elithile, ngenjongo nesevisi yabaxumi, kodwa musa ukusebenzisa le nkcazelo ngeenjongo zorhwebo.
Kule candelwana, kufuneka ubonise ukuba yiyiphi ikhukhi ekusebenziseni indawo yakho, kubandakanye nalawo adala iifowuni zakho, imidiya yoluntu, kunye ne-analytics. Ngezantsi iikhokhi ezifakwe yi-WordPress ngokungagqibekanga.
Doporučený Umbhalo: Ukuba ungeze amazwana kwisayithi yethu, unokusivumela ukuba silondoloze igama lakho, idilesi ye-imeyili kunye newebhusayithi kwiikuki. Ngale ndlela, sizama ukunyusa intuthuzelo yakho xa ubhala uluvo olutsha, ngoko awuyi kuphinda uzalise kwakhona. Ezi khukhi ziza kudlula unyaka.
Ukuba unayo i-akhawunti kwaye ungena ngemvume kule sayithi, setha icookie yesikhashana ukuqinisekisa ukuba isiphequluli sakho sithola ii-cookies. Le cookie ayinayo nayiphi idatha yedatha kwaye iya kukhutshwa xa isiphequluli sivaliwe.
Xa ungena ngemvume, senza kwakhona ii-cookies ezininzi ukugcina ulwazi lwakho lokungena kunye nokusetha isikrini. I-cookie edibeneyo ibomi beentsuku ezimbini, kwaye ukubonisa i-cookie iphelileyo ngonyaka. Ukuba uqinisekisa ukuba "Khumbula" inketho yakho, ukungena kwakho kuya kuthatha iiveki ezimbini. Ukuba ubhalisa kwi-akhawunti yakho, i-cookies yokungena izakususwa.
Ukuba uhlela okanye ushicilele isihloko, enye ikhukhi izakugcinwa kwisiphequluli sakho. Le cookie ayinayo nayiphi na idatha yedatha kwaye ibonisa kuphela i-ID yesaziso oye walungisa. Ukusebenza kwayo kuphelelwa emva kweentsuku ze-1.
Kufakwe umxholo ovela kwamanye amasayithi
Doporučený Umbhalo: Izithuba kule ndawo zingenakho okuqukethwe okufakiwe (umzekelo, ividiyo, imifanekiso, amanqaku, njl). Okufakiwe okuvela kwezinye iwebhusayithi kuziphatha ngendlela efanayo nokuba umvakatye watyelela kwenye indawo.
Le webhusayithi siqoqe ulwazi ngawe ngokusebenzisa iikuki, ukubeka tracking ezongezelelweyo wesithathu ukulandelela intsebenziswano yakho ngalo isiqulatho eqhagamshelweyo, kuquka tracking yokuxhulumana kunye nomxholo olungisiweyo, ukuba une akhawunti kwaye ungene kwi-website.
Kulo candelwana, kufuneka ubonise yeyiphi isixhobo yohlalutyo ozisebenzisayo, njani abasebenzisi uphume umkhondo, kwaye kufuneka zinike ikhonkco-nkqubo wabucala enikwa ngumboneleli wakho lweenkonzo yohlalutyo.
Ngokungagqibekanga, i-WordPress ayiqokeleli nayiphi na idatha yokuhlalutya. Nangona kunjalo, ezininzi iinkcukacha zokubamba ziqokelela idatha engaziwa. Unokufakela i-plugin ye-WordPress enika iinkonzo zokuhlalutya. Kule meko, yongeza ulwazi oluvela kule plugin apha.
Kweli candelo kufuneka unikele igama kunye noluhlu bonke ababoneleli zeqela lesithathu owabelana i data Web, kubandakanywa amaqabane, iinkonzo ilifu, kwama intlawulo kunye nabaniki nkonzo yomntu wesithathu, ngaxeshanye ucacise yintoni inkcazelo owabelana nabo yaye kutheni. Ukuba kunokwenzeka, nceda unikezele iikhonkco kumgaqo-nkqubo wokuzimela.
Ngokungagqibekanga, i-WordPress ayinikezeli naluphi na ulwazi lomntu kumntu.
Kude kube nini sigcina idatha yakho?
Kule candelo, kufuneka uchaze ixesha elide lokugcina idatha eqokelelweyo okanye eqhutywe yilo ndawo. Nangona ufunwa ukuba ube neshedyuli, ngolwazi malunga nokuba ugcina ixesha elide leedasethi kwaye kutheni uligcina, le ngcaciso ingabonakali apha. Ngokomzekelo, unokuba ufuna ukubonisa ukuba ugcina iifom zeefowuni zoqhagamshelwano kwiinyanga ezintandathu, idatha yokuhlalutya kunyaka owodwa, kunye neirekhodi zokuthengwa kwamakhasimende iminyaka elishumi.
Doporučený Umbhalo: Ukuba ungeze amazwana, izimvo kunye nemethadatha iya kugcinwa ngonaphakade. Idatha igcinwe ngenjongo yokuzenzekela ngokuzenzekelayo nokuvuma zonke izimvo ezilandelayo kunokuba zigcinwe kumgca wokumodareyitha.
Kubasebenzisi abangena kule sayithi (ukuba banalo khetho), sinokugcina ulwazi oluthile olunikezela kwingxelo yabo yomsebenzisi. Bonke abasebenzisi bayakwazi ukubona, ukuhlela okanye ukususa ulwazi lwabo lomntu kunini na (ngaphandle kokuba abanakuguqula igama lomsebenzisi). Abaphathi beWebhsayithi banokujonga kwaye bahlele olu lwazi.
Ziziphi amalungelo akho?
Kule candelo, kufuneka uchaze ukuba yintoni amalungelo abasebenzisi abangaphezu kwedatha yabo kunye nendlela abanokubhenela ngayo.
Doporučený Umbhalo: Ukuba unayo i-akhawunti kule ndawo okanye ungeze amazwana apha, unokucela ifayile kunye nokuthumela ngaphandle kwedatha esikubambe ngawe, kuquka yonke inkcazelo oyinike yona. Unokucela ukuba kususwe nayiphi na idatha esicacileyo malunga nawe. Olu khetho alubandakanyi idatha esimele siyigcinele izizathu zokuphatha, zomthetho okanye zokhuseleko.
Uthumela phi idatha yakho?
Eli candelo kufuneka liluhlu lonke ukudluliselwa kwedatha malunga nesayithi lakho ngaphandle kweYurophu yaseYurophu kwaye uchaze indlela ezi nkcukacha zikhuselwe ngayo imigangatho yobumfihlo yaseYurophu. Eli candelo lingabandakanya ukusingathwa kwakho kwewebhu, ukugcinwa kwefu, okanye ezinye iinkonzo zeqela lesithathu.
YaseYurophu komthetho wokhuseleko data kufuna ukuba ulwazi malunga labemi yaseYurophu ukuba idluliselwe ngaphandle European Union akhuselwe imigaqo efanayo kunye nemithetho ngokungathi data ezinze eYurophu. Ngoko ke, ukongezelela ukufaka idatha yendawo, kufuneka uchaze ukuba ziqinisekise ukuba le migangatho ziyafikeleleka, mhlawumbi nguwe okanye amaqela besithathu, kungakhathaliseki nokuba isivumelwano ezifana Amagatya ukhuselo iimfihlo imodeli iikhontrakthi okanye iyabophelela imithetho corporate .
Doporučený Umbhalo: Iimbono zabavakatyeki ziyakucatshulwa ngeenkonzo ezenzekelayo zokufumana ugaxekile ezingafumaneka ngaphandle.
Kule candelo, kufuneka unikeze indlela yokudibanisa yokukhathazeka kwangasese. Ukuba ufuna ukuba ne-agent, nceda unikezele negama labo kunye neenkcukacha zoqhagamshelwano ngokupheleleyo.
Ukuba usebenzisa i-website kwiinjongo zorhwebo kwaye ubandakanyeka ekuqokelelelweni okunzima okanye ukucwangciswa kolwazi lomntu siqu, kufuneka unikezele ngolwazi olulandelayo kwimigaqo-nkqubo yakho.
Indlela esiyikhusela ngayo ulwazi lwakho lomntu
Kule candelo, kufuneka uchaze ukuba yeyiphi inyathelo oyenzile ukukhusela idatha yomsebenzisi. Ngokomzekelo, unokunika ulwazi malunga nemilinganiselo yobugcisa, njenge: ukubethela; amanyathelo okukhusela njengento yokuqinisekisa amaninzi; kunye nezinye iindlela ezifana nokuqeqeshwa kwabasebenzi kwindawo yokukhuselwa kwedatha. Ukuba ukwenzile uvavanyo lokungena ngasese, ungayichaza kwakhona.
Ziziphi iinkqubo zokuvuza kweenkcukacha?
Kweli candelo kufuneka uchaze zithini iinkqubo ezikhoyo ukujongana ukuvuza data, nokuba wokwenene okanye isakhono, ezifana neenkqubo ingxelo lwangaphakathi, ezisebenza zoqhagamshelwano okanye umvuzo okufumana bugs.
Ngawaphi amaqela asithathu siqokelela idatha yakho?
Ukuba isiza sakho sithola idatha yomsebenzisi wesithathu, kubandakanywa nabathengisi, le ngcaciso mayifakwe kwisigaba sesaziso sakho sobucala esichaphazela ngolwazi lwesithathu.
Yiyiphi isigqibo esisenzayo kunye kunye / okanye idatha yomsebenzisi wefayile
Ukuba yakho inikezela ngeenkonzo ukuba kubandakanya automated - umzekelo, ngokuvumela abathengi ukuba isicelo ngetyala okanye ukuqokelela iinkcukacha kwiprofayile intengiso - kufuneka ubeke ezi nkqubo, yaye zibandakanya ulwazi zisetyenziswa njani le nkcazelo, yintoni wenza isigqibo sokuba ezi data ihlanganiselwe kwaye oko amalungelo abo abasebenzisi izigqibo ngaphandle koncedo lomntu.
Iimbopheleleko zolwazi kwi-industry
Ukuba uyilungu le shishini elilawulwayo okanye ukuba ulawulwa neminye imithetho yangasese, unokucelwa ukuba unikezele ngolwazi oluyimfuneko.
Yemfihlo for PetrPikora.com
Ukuba ufuna nayiphi na ingcaciso engaphezulu okanye unemibuzo malunga yethu nkqubo wabucala, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi email xa Ukuba bucala.
Xa www.PetrPikora.com thina Cinga iimfihlo iindwendwe zethu ukuba kubaluleke kakhulu. Olu xwebhu umgaqo-nkqubo Uchaza ngokweenkcukacha Iintlobo Inkcazelo Yobuqu ziqokelelwa kwaye yabhalwa www.PetrPikora.com kwaye silisebenzise ngayo.
Njengabanye iisayithi ezininzi Web, www.PetrPikora.com isebenzisa iifayile log. Ezi fayile Merel eloga iindwendwe kwisiza - Ngokwesiqhelo inkqubo eqhelekileyo kwiinkampani ibamba nenxalenye ibamba analytics iinkonzo. Ulwazi ngaphakathi iifayile log iquka internet protocol (IP) iidilesi, uhlobo lwebrawuza, Nomnikezeli Wenkonza ye Internet (ISP), umhla / ixesha nesitampu, amaphepha Ethetha / phuma, kwaye Mhlawumbi inani konqakrazo. Le nkcazelo isetyenziselwa The ukuhlalutya iindlela, ilawule isiza, intshukumo yomsebenzisi ehlabathini isiza, Ibuthele ulwazi lwabantu. iidilesi ze IP, imbalela kunye nezinye iinkcukacha ezinganxulumananga ukuba naluphi na ulwazi lwakho olubonakalayo Loo.
www.PetrPikora.com usebenzisa cookies ukugcina ulwazi malunga iindwendwe 'ozikhethayo, ukuba irekhodi umsebenzisi-ngqo ulwazi Zeziphi kumaphepha umtyeleli site zokungena okanye utyelelo, kwaye ngokwakho okanye wenze isiqulatho yethu page web esekelwe phezu iindwendwe' uhlobo ibrawuza okanye olunye ulwazi umtyeleli ithumela nge browser wabo.
→ I-Google, njengomthengisi weqela lesithathu, isebenzisa ikhukhi ukukhupha iintengiso kwi-www.PetrPikora.com.
→ Ukusetyenziswa kwe-Google yecookie ye-DART kuvumela ukuba ibenze iintengiso kwiindwendwe zethu kwiindawo ezisekelwe kwi-www.PetrPikora.com nakwezinye iiwebhusayithi kwi-Intanethi.
→ Abasebenzisi zingakhetha kokusetyenziswa ze cookie DART ngokundwendwela i Google ad kunye nothungelwano isiqulatho umgaqo-nkqubo kwi-URL zilandelayo - http://www.google.com/privacy_ads.html
Partners zethu Advertising
Amanye amaqabane ethu entengiso Sinokusebenzisa iikuki kunye Nezinto web kwisayithi yethu. namaqabane ethu aquka .......
Nangona ngamnye kwaba babelani intengiso nkqubo yabo yabucala kwisayithi yabo, zisisibonelelo nezihlaziywa numbers igcinwa apha: IMigaqo yabucala.
Ngamana udibane loluhlu ukufumana umgaqo-nkqubo wabucala ukuze ingabangeli umtya ngamnye namaqabane yokupapashwa kwe www.PetrPikora.com.
www.PetrPikora.com akukho ukufikelela okanye ukulawula cookies Ukuba Ezi zisetyenziswa Iintengiso zomntu wesithathu.
Kufuneka bajonge imigaqo-nkqubo wabucala ezahlukeneyo Ezi abancedisi ad wesithathu ukuze ufumane inkcazelo ethe vetshe malunga nezenzo zabo kwakunye ukuba imiyalelo malunga ukuphuma kwezenzo ezithile ngayo. www.PetrPikora.com ukuba umgaqo-nkqubo wabucala awusebenzi, kwaye asikwazi ukulawula imisebenzi, imbalela okanye web sayithi ezinye Iintengiso. Ngamana ukufumana udweliso nkqubo isindululo yabucala ngokuBanzi amakhonkco zabo apha: Nkqubo wabucala Links.
Ukuba unqwenela ukukhubaza cookies, ukuze nenze ngokunjalo ngabodwa zakho iinketho umkhangeli. ulwazi oluthe vetshe malunga nolawulo cookie kunye bencwadi be web ethile lingafumaneka kwi websites ngokulandelelana le bencwadi '. Yintoni Cookies?
Sikholwa ukuba kubalulekile ukubonelela ukhuseleko olongezelelweyo kubantwana abakwi-intanethi. Sikhuthaza abazali nabagadi ukuba bachithe ixesha kwi-intanethi kunye nabantwana babo ukugcina, ukuthatha inxaxheba kunye / okanye ukubeka iliso kunye nokukhokela umsebenzi wabo kwi-intanethi. I-www.PetrPikora.com ayiqokeleli ngolwazi oluchanekileyo oluvela kubantwana abangaphantsi kwe-13. Ukuba umzali okanye umgcini wakho ukholelwa ukuba i-www.PetrPikora.com inokwakheka kwedatha ulwazi oluchongiweyo lomntwana oneminyaka engaphantsi kwe13, nceda uqhagamshelane nathi ngokukhawuleza (usebenzisa umnxeba kumhlathi wokuqala) kwaye siya kusebenzisa imizamo yethu emihle ukususa ngokukhawuleza loo ngcaciso kwiirekhodi zethu.
Lo mgaqo yabucala isebenza kuphela imisebenzi yethu intanethi kwaye isemthethweni neendwendwe website yethu malunga ulwazi ekwabelwana kunye / okanye eqokelelwe khona. Lo mgaqo-nkqubo awusebenzi naluphi na ulwazi oluqokelelwe offline okanye ngokusebenzisa amajelo ngaphandle kule website.
Ngokusebenzisa website yethu, uyavuma ukuba yethu yemfihlo ndivuma ngokwemiqathango yalo.
Lo Mgaqo-nkqubo weMfihlo ugcine ukuhlaziywa nge-: ngeCawa, uAgasti 27th, 2017.
Sifanele hlaziya, ilungise okanye enze naluphi na utshintsho yethu nkqubo wabucala, ezo nguqu ziya kuposelwa apha.
Ulwimi lwesampuli luquka izinto ezisisiseko zedatha yakho eyilondolozi, ukugcina kunye nokwabelana, kunye nabani na abanokufikelela kule datha. Kuxhomekeke kwiziphi izicwangciso ezivunyelwe kwaye zeziphi iiplagi ezongezelelweyo ezisetyenzisiweyo, ulwazi oluthile olubelwana ngalo kwisitolo sakho luyahluka. Sincoma ukubonisana negqwetha xa usenza isigqibo malunga naluphi ulwazi oluchazayo kumgaqo-nkqubo wakho wobumfihlo.
Siqokelela ulwazi malunga nawe kwinkqubo yokukhangela kwisitolo sethu.
Siza kusebenzisa ii-cookie ukugcina umkhondo wezinto zakho ezinqamleziweyo ngelixa upheqa isayithi lethu.
Qaphela: Unokuba unqwenela ukunika iinkcukacha iinkcukacha zakho ze-cookie kunye nekhonkco kwilo candelo ukusuka apha.
Ngokubanzi sigcina ulwazi malunga kuwe logama nje sifuna ulwazi iiNjongo Izinto siqokelela kwaye bayisebenzise, ​​yaye akukho Ngokomthetho efunekayo yokuqubeka ukusigcina. Ngokomzekelo, siya kugcina ulwazi lomyalelo kwi-XXX iminyaka yeenjongo zerhafu kunye neenjongo zokuphendula. Oku kufaka igama lakho, idilesi ye-imeyile kunye neelithi zokuthengisa kunye neentengiso.
Kule candelo kufuneka ubhale uluhlu olwabelana ngalo nedatha, kwaye ngenjongo yintoni. Oku kungabandakanya, kodwa kungaphelelanga, ukuhlaziywa, ukuthengisa, iindlela zokuhlawula, ababoneleli bokuthumela, kunye nabangena emithathu.
Sokwabelana ngolwazi kunye nabantu abasithathu abasinceda ukubonelela ngee-oda zethu kunye neenkonzo zokugcina; umzekelo -
Kule candelwana kufuneka ubhale uluhlu lweenkqubo zokuhlawula iintlawulo ezisebenzisayo ezisebenzisayo ukufumana iintlawulo kwivenkile yakho kuba ezo zinokuphatha idatha yabathengi. Sifake iPalaPal njengomzekelo, kodwa kufuneka ususe le nto ukuba awusebenzisi i-PayPal.
Ngokusebenzisa olu longeza, unokuba ugcina idatha yakho okanye ukwabelana ngolwazi ngeenkonzo zangaphandle. Funda kabanzi malunga nendlela oku kusebenza ngayo, kuquka oko ungathanda ukubandakanya kumgaqo-nkqubo wakho wobumfihlo.
Xa uthe usebenzisa Google Imigca Web (okwendalo) okanye ukudlala iividiyo okanye izandi nge YouTube okanye bedlala e Slider Revolution sincoma ukongeza ibinzana oluhambelana umbhalo nkqubo yakho Wedwa:
Isiza sethu sisebenzisa iiplagi ezivela kwi-YouTube, eqhutywa yiGoogle. Umsebenzisi wephepha yi-YouTube LLC, i-901 Cherry Ave., iSan Bruno, CA 94066, eU.SA.
Ukuba u tyelela elinye lamaphepha ethu aqukethe i-plugin ye-YouTube, unxibelelwano kwiiseva ze-YouTube lusekwe. Nantsi iseva ye-YouTube ikwaziswa malunga namaphepha ethu owatyelele.
Ukuba ungene ngemvume kwi-akhawunti yakho ye-YouTube, i-YouTube ikuvumela ukuba unxulumane nokuziphatha kwakho kokuphequlula ngokuphambili kwiphrofayela yakho. Unokuthintela oku ngokungena kwi-akhawunti yakho ye-YouTube.
I-YouTube isetyenziselwa ukwenza i-website yethu ibonakale. Oku kubangelwa umdla obulungileyo phantsi koBugcisa. 6 (1) (f) iDGGVO.
Ulwazi olungaphezulu malunga nokuphatha idatha yomsebenzisi lunokufumaneka kwisibhengezo sokukhuselwa kwedatha ye-YouTube phantsi https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
I-website yethu isebenzisa iimpawu ezibonelelwe nguVimeo yokuzonwabisa portal. Le nkonzo inikezwa nguVimeo Inc., i-555 West 18th Street, eNew York, eNew York 10011, eU.SA.
Ukuba u tyelela elinye lamaphepha ethu aqukethe i-Vimeo plugin, uxhumano lwe-Vimeo servers lusekwe. Nantsi iseva yeVimeo yaziswa malunga namaphepha ethu owatyelele. Ukongeza, iVimeo iya kufumana idilesi yakho ye-IP. Oku kusebenza xa ungangeni ngemvume kwiVimeo xa u tyelela i-plugin yethu okanye ungenayo i-akhawunti ye-Vimeo. Ulwazi ludluliselwa kwi-Vimeo iseva e-US, apho igcinwa khona.
Ukuba ungene ngemvume kwi-akhawunti yakho ye-Vimeo, i-Vimeo ikuvumela ukuba unxulumane nokuziphatha kwakho kokuphequlula ngokuphambili kwiprofayili yakho. Unokukuthintela ngokungena kwi-akhawunti yakho ye-Vimeo.
Ukufumana ulwazi oluninzi malunga nendlela yokusingatha idatha yomsebenzisi, nceda ubhekise kwi-Vimeo Policy Policy https://vimeo.com/privacy.
IiGoogle Web Fonts
Ukubonakaliswa kwamagama afanayo, eli phepha lisebenzisa amafonti ewebhu anikezelwe yiGoogle. Xa uvula iphepha, isiphequluli sakho sithwala iifayile zewebhu ezifunekayo kwisilondolozi sakho sogqirha ukubonisa imibhalo kunye nefonti ngokuchanekileyo.
Ngaloo nto umkhangeli wakho uzimisele ukuqhagamshela ngqo kwiiseva zeGoogle. I-Google iyakwazi ngoko ukuba iphepha lethu lewebhu li fi kelelwe ngedilesi yakho ye-IP. Ukusetyenziswa kweefayile zewebhu zeGoogle zenziwa ngentshisekelo yenkcazo efanayo kunye nekhangayo ye-plugin yethu. Oku kubangelwa umdla obulungileyo phantsi koBugcisa. 6 (1) (f) iDGGVO.
Ukuba i-browser yakho ayixhasi amafonti ewebhu, ifayili evamile isetyenziswa yikhompyuter yakho.
Ulwazi olungaphezulu malunga nokuphatha idatha yomsebenzisi, lunokufumaneka https://developers.google.com/fonts/faq kunye nemigaqo-nkqubo ye-Google yobumfihlo https://www.google.com/policies/privacy/.
Kumaphepha zethu, iplagi ezifakiweyo ze kothungelwano lwezentlalo SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, UK) Ngamana kuhlanganiswe. Iiplagizi ze-SoundCloud zingabonwa nge logo ye-SoundCloud kwisayithi yethu.
Xa undwendwela isayithi yethu, uqhagamshelwano ngqo Phakathi ibhrawuza yakho kwaye iseva SoundCloud Umi nge-plugin. Oku kuvumela i-SoundCloud ukuba ifumane ulwazi olutyelele kuyo indawo yethu kwidilesi yakho ye-IP. Ukuba unqakraza "Like" okanye amaqhosha "Yabelana" ngoxa wena ungene kwi-akhawunti yakho SoundCloud, uyakwazi ukunxibelelanisa okuqulethwe amaphepha zethu kwiprofayile yakho SoundCloud. Oku kuthetha ukuba i-SoundCloud inokudibana nokuhambela kwamaphepha ethu kunye neakhawunti yakho yomsebenzisi. Siya Ngaba ungathanda ukunazisa ukuba, njengomboneleli lamaphepha isicelo thina, akukho ulwazi umxholo data ezingumvuka okanye indlela uya Isetyenziswa yi SoundCloud. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi malunga SoundCloud ngayo umgaqo-nkqubo wabucala, nceda uye ku https://soundcloud.com/pages/privacy.
Ukuba awufuni i-SoundCloud ukudibanisa ukutyelela kwakho kwiziko lethu nge-akhawunti yakho ye-SoundCloud, nceda ungene kwi-akhawunti yakho ye-SoundCloud.